Yini Ikhadi Lezithombe Engilidingayo? - Easy Multi Khombisa Software
Yiliphi Ikhadi Lezithombe Engilidingayo?
Idalwe Qalile 16 / 11 / 2019
Ungasebenzisa noma iliphi ikhadi lehluzo olifisayo, noma kunjalo kufanele likwazi ukusekela inani lezibuko ohlose ukulixhuma. I-Easy Multi Display izosekela kuze kufinyelele ku-Display eyi-6 ekhethekile.
* Bheka ngezansi ukuthola eminye imininingwane mayelana nezixazululo zebhizinisi lethu ngemibukiso engaphezu kuka-6.
I-NVIDIA GeForce GTX 1050
Izikrini ezingaphezu kuka-3
I-NVIDIA GeForce GTX 1060
I-NVIDIA GeForce RTX 1660
I-AMD Radeon RX VEGA
ISIHLOKO SEKHADI LOKUFUNDA
I-HDMI4096 x 2160 ku-60 Hz
Bonisa i-Port7680 x 4320 ku-60 Hz
DVI1920 x 1200 ku-60 Hz
I-Mini Display Port2560 × 1600 ku-60 Hz
Qaphela ukukhetha ikhadi lakho ngokuya ngemiphumela etholakala ezikrinini zakho, lezo ezine-DisplayPort noma iMiniDisplayPort azivamile kakhulu futhi ukusetshenziswa kwesiguquli (i-DisplayPort? HDMI) kuyabiza.
Ngaphandle kokuphefumulaUhlelo Lwes Passive
Ukusetshenziswa Kamandla Okuncishisiwe
Uhlobo olulodwa kuphela lokukhishwa kwesikrini (MiniDisplayPort)
Nawa amakhadi ehluzo amabili athandwayo esincomayo. Lawa ngamakhadi ochwepheshe, ontengo yakhe yayinqunyiwe ezungeze i- € 300:
1. I-NVIDIA QuADRO P620
Ukusekelwa okungafika kwezi-4 (MiniDisplayPort)
Chofoza lapha ukuya ku-NVIDIA Iwebhusayithi ukuthola eminye imininingwane.
2. I-AMD RADEON PRO WX 4100
Chofoza lapha ukuya kwiwebhusayithi ye-AMD ukuthola eminye imininingwane.
Ukukhishwa kwesikrini okuningi (HDMI-DVI-DisplayPort)
Ukufaneleka kwemali ekhokhwayo
Ukusetshenziswa kwamandla okuphezulu
Umsindo (+ -30db)
Sincoma leli khadi elinemifanekiso, eshibhile, eguquguqukayo futhi elungele kahle izibonakaliso zedijithali, ezinentengo cishe ku- € 200:
1. IGIGABYTE GEFORCE GTX 1050 WINDityaCE OC 4GB Ti
Ukusekelwa okungafika kwezi-6
I-3 x HDMI (Izikrini ezi-3 nge-HDMI)
1 x DisplayPort (1 isikrini esine-DisplayPort
I-1 x DVI-D (Izikrini ezi-Dual link 2 nge-DVI)
Kuhlolwe futhi kuvunyelwe ukusetshenziswa okunamandla okungu-24/7, inani elifanele imali.
Chofoza lapha ukuya kuwebhusayithi yeGigabyte ukuthola eminye imininingwane.
Amagama angukhiye wokuthenga lo mkhiqizo: Gigabyte GeForce® GTX 1050 Windforce OC 4GB Ti
Izikrini ezingaphezu kuka-6
Ungasebenzisa amakhadi wehluzo ezi-2 ku-SLI nge-motherboard enama-2 PCI-e slots ukuphatha izikrini ezifika kwezingu-12.
Amanye amakhadi wehluzo aphezulu aphezulu anikeza ukuphathwa kwezikrini eziyi-16, futhi sinikeza ngezixazululo zesoftware yezikhungo zemiyalo nezindonga zesikrini.
Sithanda ukukusiza ngephrojekthi yakho, xhumana nelinye leqembu lethu lokusekelwa ukuqinisekisa ukuthi ukhetha imishini efanelekile futhi uxoxe ngezixazululo zethu ezahlukahlukene zesoftware.
Ungayithenga kanjani imidiya yedijithali futhi unciphise ukukhwabanisa kwezikhangiso
Izimpawu zedijithali: Umkhuba omusha kwezokuxhumana